समाचार - इलेक्ट्रॉनिक निर्माणको लागि प्रयोग गरेर स्विचको सामान्य प्रकारहरू
यदि तपाईं माइक्रोसविचको बारेमा बढि फेला पार्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाईं सहि पृष्ठमा हुनुहुन्छ। यस लेखमा, हामी माइक्रो स्विच को विभिन्न प्रकार मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यसले तपाईंलाई तपाईंको परियोजनाको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहि इकाईको लागि रोज्न मद्दत गर्दछ। यस लेखले तपाईंलाई ती उपकरणहरूको types प्रकारहरूमा गहिरो अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ। तिनीहरूलाई एक एक गरी जाँच गरौं। थप पत्ता लगाउन पढ्नुहोस्।
यी ईकाईहरूका छ प्रकारहरू तल सूचीबद्ध छन्। जे होस् यी सबैको प्रदर्शन गर्न समान कार्यहरू छन्, त्यहाँ उनीहरूका डिजाइनहरू बीच भिन्नता छ। यी भिन्नताहरू हुन् जसले तिनीहरूलाई एक अर्काबाट फरक बनाउँदछ।
२. बटन थिच्नुहोस्
Rock. रोकर स्विचहरू
R. रोटरी स्विचहरू
Sl. स्लाइड स्विचहरू
Og. स्विच टगल गर्नुहोस्
माइक्रो स्विच सानो स्विचहरू हुन् जसले लीभर वा पुश बटन सुविधा दिन्छ। यी इकाइहरूलाई ठीकसँग काम गर्न धेरै शारीरिक प्रयासको आवश्यक पर्दैन। किनकि यो एकदम सानो छ, तिनीहरू परियोजनाहरूको सानो स्तरको अनुप्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको हो।
२) पुश बटन प्रकार
यी एकाइहरू धेरै शैली र आकारहरूमा फेला पार्न सकिन्छ। यस बाहेक, विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू तिनीहरूलाई बनाउन प्रयोग गरिन्छ। जब तपाईं बटन थिच्नुहुन्छ, यो सर्किट खुल्छ वा बन्द हुन्छ। तपाई कि त छोटो वा लेचिंग प्रकारबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। पछि रहन्छ जब तपाईं यसलाई फेरि थिच्नुहुन्न अन वा अफ हुन्छ।
)) घुमाउने प्रकार
जब तपाइँ यस प्रकारको स्विच थिच्नुहुन्छ, यसले सम्पर्कहरू बन्द गर्न उपकरण बटन रोक्दछ। त्यस्तै गरी, यदि तपाईंले स्विचलाई अर्को साइडमा रक गर्नुभयो भने, यसले सर्किट खुल्नेछ। फेरि, यी उपकरणहरू विभिन्न आकार र शैलीहरूमा उपलब्ध छन्। उदाहरण को लागी, तपाई यसलाई दुई कन्फिगरेसनमा लिन सक्नुहुन्छ: डबल पोल वा एकल ध्रुव।
नामले देखाउँदछ, यस प्रकारको एकाईमा चल्ती सम्पर्क समावेश छ। यी स्विचहरूले कसरी काम गर्दछन् भन्ने बारे अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि तपाइँ कुकरमा डायल देख्न सक्नुहुन्छ।
)) स्लाइड प्रकार
स्लाइड स्विचले सानो घुम्ती फिचर गर्दछ। यदि तपाईं उपकरण भित्र सर्किट खोल्न वा बन्द गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले घुँडा स्लाइड गर्नु पर्छ। तिनीहरू कम्प्याक्ट इकाई भएकाले परियोजनाहरूका साना सर्किटहरूको लागि उत्तम विकल्प हुन सक्छ विशेष गरी तपाईंलाई परिवर्तनको आवश्यक पर्दछ। उदाहरण को लागी, यी उपकरणहरु लाई सामान्यतया आउँदो रेल को लागी ट्र्याक परिवर्तन गर्न रेल मा प्रयोग गरीन्छ।
बटन माइक्रो स्विच, इलेक्ट्रिक टगल स्विच, टगल स्विच, बटन फूटविच पुश गर्नुहोस्, माइक्रो पुश बटन माइक्रो स्विच No Nc सँगै, स्विच बुट टगल गर्नुहोस्,